Fabinho oo ka hadlay wararka la xiriira in Mohamed Salah uu ka tagayo kooxda Liverpool – Gool FM
Dajiye January 13, 2021
(Liverpool) 13 Jan 2021. Xiddiga reer Brazil iyo kooxda Liverpool ee Fabinho ayaa xaqiijiyay in wararka xanta ah ee daba socda laacibka reer Masar ee Mohamed Salah ay sabab u tahay inuu ka mid yahay ciyaartoyda waa weyn ee kubadda cagta.
Waxaa jiray dhawaanahan warar xan ah ee sheegayay in Mohamed Salah uu ka tagayo kooxda Liverpool, maadaama uu muujiyay sida uu u jecel yahay Real Madrid iyo Barcelona kaddib wareysi uu bixiyay bishii hore.
Fabinho ayaa u sheegay shabakada caanka ah ee “Sky Sports”:
“Xanta ayaa marwalba la xiriirta ciyaartoyda waa weyn, Salah wuxuu u ciyaaraa Liverpool, oo ah mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn adduunka, waana wax iska caadi ah in magaciisa lala xiriiriyo kooxo kale.”
“Salah aad ayuu ugu faraxsanyahay halkan, wuxuuna ku faraxsanyahay waxqabadkiisa xiliciyaareedkan, wuxuuna doonayaa inuu noqdo kan ugu fiican, wuxuuna doonayaa inuu caawiyo kooxda isla markaana uu si adag uga shaqeeyo arintaas.”
“Tani markasta way jirtay oo haba yaraatee waxba isma bedelin, wuu sii wadaa dhalinta goolasha, taas oo ah waxa qof walba uu caadeystay inuu arko, qolka labiska, cid kasta ayuu la hadlaa markastana wuu la kaftamaa.”
“Ciyaartoyda waa weyn had iyo jeer waxaa ku hareeraysan warar xan ah oo ku aadan inay u wareegayaan kooxo caan ah.”
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Real Sociedad iyo Barcelona ee tartanka Spanish Super Cup-ka oo la shaaciyey